Raadi Xarunta Culeyska ee Naqshadeynta Soo Bandhigida Weyn | Martech Zone
Qof kastaa wuu ogyahay in PowerPoint uu yahay luqadda ganacsiga. Dhibaatadu waxay tahay, inta badan dekedda PowerPoint ma aha wax ka badan taxaddarro isdaba-joog ah oo badiyaa oo badiyaa wareersan oo la socda is-waraysiyo soo-jeedin ah oo ay soo bandhigayaashu soo bandhigayaan.
Markii aan soo saarnay kumanaan bandhigyo ah, waxaan aqoonsanay hababka ugu fiican ee fudud, laakiin aan dhif ahayn in la shaqeeyo. Si taas loo gaaro, waxaan abuurnay Center of cuf, qaab cusub oo loogu talagalay bandhigyada dhismaha. Fikradda ayaa ah in sagxad kasta, slide kasta, iyo qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira sagxadda ay u baahan tahay bar-tilmaameed. Si taas loo sameeyo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka fekero soo bandhigista saddexda qodob ee taagan: (1) macro, soo bandhigid ballaadhan, (2) isdabajoog ah, iyo (3) heer gunta, halkaas oo xog kasta ama waxyaabaha ku jira mid kasta slide si taxaddar leh ayaa loo tixgeliyaa.
Qaado Aragtida Macro
Si aad u bilawdo, ka fikir soo-jeedinta marka laga eego aragtida macro, adoo fiirinaya soo-jeedintaada guud ahaan. Waa maxay barta udub-dhexaadka u ah soo-jeedintaadu, taasoo ka dhigaysa sagxadda isku-xidhka isla markaana ka dhigaysa ujeeddada wax-soo-saarkaaga? Ka dib u gudub hal heer. Bog kasta waa inuu si ula kac ah u sii dheeraadaa ujeedka sagxadda. Haddii aysan sidaas yeelin, markaa waa inaad weydiisaa, muxuu yahay ujeedka slide-kaasi? Sidee ayey ugu habboon tahay sawirka weyn ee soo bandhigidda?
Intaa waxaa sii dheer, isbarbar dhig kasta waa inuu sidoo kale leeyahay Xarun u gaar ah oo culeyska culeyska, diiradda oo isku haysa, wuxuu siinayaa dheelitir iyo isku xirnaan. Ugu dambeyntiina, ku soo dhawow waxa ku jira bogag kasta. Tijaabi sadar kasta, shax kasta, cinwaan kasta. Shay kasta, miis ama garaaf waa in ay la hadlaan diiradda bandhigga, laakiin sidoo kale waxay u baahan tahay barta u gaarka ah.
Aan ku tusaaleeyo sarbeeb. Qaado nidaamkayaga qorraxda. Qorraxdu waa cunsurka udub-dhexaadka u ah qorraxda waxayna ku dhacdaa meeraha cuf isjiidadka leh. Si kastaba ha noqotee, meeraha kasta wuxuu leeyahay jiidis u gaar ah. Si la mid ah, isbiidh kasta, iyo shay kasta oo ku jira bogag kasta, waa inay la hadlaan xarunta guud ee culeyska (ie, qorraxda). Si kastaba ha noqotee, sida meerayaasha ku jira nidaamkeenna qorraxda, isqarxin kasta iyo shay kasta oo ku jira slide kasta waa inay sidoo kale yeeshaan diirad u gaar ah, taasoo ka dhigaysa inay ahaato mid sal leh oo isku xidhan.
Aynu dib u eegno xeelado iyo xeelado si aan u hubino in diirada la saaro heer kasta.
Tixgeli Deck-kaaga Guud ahaan
Soo bandhigidaada guud ahaan waa inay lahaato hal fikrad weyn, duluc ama ujeedo. Waxaa loo baahan yahay ujeedo guud. Dabaqadani ma iibineysaa shaqadaada, fikradahaaga, cilmi-baaristaada? Hadday sidaas tahay, go'aanso sheyga (yada) aad iibinayso. Haddii kale, waa miiskaaga oo si fudud u wadaagaya shaqadaada, adoo u sheegaya iyada oo aan loo baahnayn in laga dhigo dhagaystayaasha inay tallaabo qaadaan. Haddii aad wax wadaagayso, maxay yihiin waxyaabaha aad doonayso inay dhagaystayaashu ka qaataan bandhigga?
Marka xigta, tixgeli dhagaystayaasha. Marka loo eego heerka makro, ka fikir waxyaabaha ka kooban dhagaystayaashaada, hadday ahaan lahayd macaamiisha, maamulka, ama hay'adda ballaadhan. Bandhigyada badankood si fiican looma cayimin baahiyaha dhagaystayaasha. Taabadalkeed, waxaa laga dhisay aragtida kuwa hadla, laakiin waa muhiim inaad kala qaybiso dhagaystayaashaada oo aad sheekadaada ku dhisto hareerahooda. Maxay halkaan u joogaan? Waa maxay heerka aqoontooda iyo doorarkoodu? Intee in le'eg oo cunto ah ayey u hayaan faahfaahinta granular, gaabinta, iyo wixii la mid ah? Maxay yihiin walaacooda xirfadeed, baaqyadooda waxqabad? Iyagu ma shaki baa mise waa rumaystayaal? Noocee ah iska caabin ayaad la kulmi doontaa? Jawaabaha ayaa kaa caawin doona qaabeynta sida aad u dhiseyso sariirtaada. Inaad si qoto dheer uga fikirto dhagaystayaashaada kahor dhismahaaga bandhiggaagawaxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta 'saameynteeda.
Ugu dambeyntii, tixgeli wadajirka. Dib u laabo oo guud ahaan ka eeg aragtida naqshadeynta iyo sheekada. Marka hore, dhis qaab-sheeko. Soo bandhigiddu ma aha taxane ah fikrado kala go'ay, dhibco xog ama fiiro gaar ah, laakiin waa qaabka ugu dambeeya ee sheeko-soo-saarka multimedia. Naqshadeynta bandhiggu waa anshax soo baxaya oo isku daraya ereyo, fiidiyoow, animation, xog, warbaahin kasta oo la malaysan karo.
Gogol kastaa wuxuu u baahan yahay qaab sheeko; bilow, dhexe, iyo dhammaad, inta aad u kala jebinayso fikradaha muhiimka ah qaybo iyo qaybo-hoosaadyo. Hadba sida ay u adagtahay mawduuca, ayaa loo baahan yahay abaabul badan. Qofku wuxuu ubaahan yahay gacan qabasho fikradaha kooxeed, wuxuu abuurayaa kala sarayn iyo isku xigxig. Waxaan ku bilaabayaa sharraxaad, oo dhiseysa kala sarrayn xagga qeexitaanka, ka dibna u gudbaya sheeko-qorista (ie, qiyaastii sagaal ama 12 jibbaaran oo go 'ah), oo aan ka sameeyo sawirro adag, oo aan faahfaahin lahayn. Nidaamkani waa hab lagu qaado macluumaadka adag oo lagu dhiso sheeko muuqaal ah. Adiga oo adeegsanaya isugeynta tilmaanta iyo sheeko qorista, natiijadu waxay noqon doontaa qaab sheeko abaabulan oo leh ula-jeedooyin ula kac ah.
Marka ay timaado xeeladaha naqshadeynta fudud, sharciga ugu aasaasiga ah ee la raaco si loo dhiso wada noolaansho guud ahaan sagxaddaada waa xaddidaadda animations-ka iyo kala-guurka. Xaqiiqdii, xaddididda dhammaan dhaqdhaqaaqyada ku-meelgaarka aasaasiga ah ee libdhi waa sharci wanaagsan oo suul ah. Ilaa aad tahay qof naqshadeeye xirfad leh ama animator ah, waa inaad ka fogaataa animations PPT iyo kala guurka. Taasi waxay tiri, kala-guurka fadeexada ayaa saldhig weyn ka ah bandhigyada maxaa yeelay way fududahay, caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa filimka, laakiin ma ahan cheesy
Labada tab ee soo socota waxay la xiriiraan noocyada farta. Iskuday inaad kudhex istaagto laba qoys oo font ah soojeedinta: mid cinwaanada iyo cinwaannada, midkalena waxkastoo kale (oo ay kujiraan subtitles-yada iyo nuqul jirka). Wanaagsan, isticmaal hal font qoys laakiin kala duwanaanshaha culeyska (tusaale, geesinimo cinwaanada iyo cinwaannada, caadiga ama iftiinka nuqul jirka iyo cinwaanada). Waxaan badanaa isticmaalaa Franklin Gothic, oo ah xarrago, xarfo isku dheellitiran. Calibri waa ikhtiyaar weyn oo nuqul jirka ah iyo qoraalka dheer, maadaama ay yartahay xarfaha farqiga ah waxay keydineysaa booska, iyadoo ay fududahay in lala shaqeeyo.
Taatikada xigta waa midab. Marka ay timaado midabada font, u janjeer inaad isticmaasho hal midab oo dhan, ama midabbo isku midab ah, ugu fiican madow / cawl. Waxaad dhihi kartaa taasi waa caajis, laakiin runta ayaa ah xiisaha muuqaalka waxaa laga abuuray nuance isticmaalka farta, ma ahan qaansoroobaad xarfaha midabada dhalaalaya. Xiisaha muuqaalka ahi wuxuu ka yimaadaa darajooyinka, sawirrada ama xogta. Marka ku dheji hal ama laba nooc, oo xaddid isticmaalka midabka. Si ku habboon ugu isticmaal hal midab dhammaan nuqullada jirka, iyo hoos kala duwan oo isku midab ah si loo abuuro kala sarreyn.
Slide kasta, bar tilmaameed
Waxaan eegnay sagxadda caalamka; hadda waxaan dabooli doonnaa isbarbar dhigyada shaqsiyeed. Sideed u qiimeyn kartaa boodboodka? Sidee ku xaqiijin kartaa in mid kastaa leeyahay xarun culeys oo midba midka kale leeyahay? Mar labaad, slide kasta waa inuu sii dheeraadaa ujeeddada guud ee sagxadda. Hadduusan sidaas yeelin, muxuu u jiraa? Si kastaba ha noqotee, isbarbar-dhig waliba wuxuu kaloo u baahan yahay bar-tilmaameed u gaar ah. Waa inuu jiraa kala sarayn, isu dheelitirnaan iyo tilmaamo muuqaal ah si shakhsiga micnihiisu u micno noqdo mid cad, iyadoo la kala saarayo macluumaadka ka muhiimsan kan aan muhiimka ahayn.
Sida heerarka kale, waxaa jira xeelado lagu shaqaaleeyo heerka isbadbadalka. Xikmadda caadiga ah ee naqshadeynta isbadalku waa soo bandhigida hal fikrad halkii slide. Dhibaatadu waxay tahay, taasi maahan mid had iyo jeer waxqabad leh. Hal fikrad halkii slide waa xeelad weyn oo loogu talagalay wadahadalka TED, laakiin had iyo jeer uma shaqeeyo soo bandhigida shirkadaha maalinlaha ah, xaqiiqdii maaha cilmi baaris ama bandhigyo adag oo xog badan leh.
Inta badan bandhigyada shirkadaha, "alaab siinta" waa lama huraan. Xalku waa isku dheelitirnaan muuqaal ah iyo kala sarrayn, marka halkii xoogga la saari lahaa hal fikrad halkii slide, qaabka ugu habboon waa inuu ahaadaa hal fikrad daqiiqad kasta waqtigeeda. Waxaad kuheli kartaa fikrado badan intii aad ugubaahantahay isbadal la bixiyay, iyo macluumaad badan, laakiin furaha ayaa ah inaad xakameyso dareenka dhagaystayaasha daqiiqad kasta oo wakhtiga ah. Tani waxay ku saabsan tahay hagaajinta isku xidhka waqtiga-dhabta ah ee u dhexeeya muuqaalka iyo ereyada lagu hadlo, si loo hubiyo in dhagaystayaashu aysan ku wareerin. Muuqaalka iyo ereyada waa inay si cad isugu xirnaadaan markasta.
Xeelad kale - fududee. Laga yaabee inay xoogaa hami tahay, laakiin naqshad nadiif ah waa qabow. Daaweynta iyo tafatirka waxay abuuraan fududaan. Haddii aad ka shakisan tahay, eexdu waa inay ahaataa dhinaca goynta iyo dhigista wax ka yar intii aad ka rogi lahayd slide kasta.
Marka xigta, tixgeli booska taban ee ku xeeran marinka qoraalka, shaxda ama sawirka. Meesha xun waxay ka caawineysaa qeexidda xuduudaha isbarbar dhig iyo muuqaal, waxayna abuureysaa isu dheelitirnaan. Tani waa fikrad khiyaano leh, laakiin waxay ku dareysaa casriyeyn naqshadeynta naqshadeynta. Waxaad rabtaa xoogaa boos diidmo ah laakiin aan aad u badnayn; waa dheelitir u baahan feker iyo ku dhaqan. Ku dadaal xagga isu dheelitirka, isbadbadalku wuxuu yeelan doonaa nidaam iyo hufnaan muuqaal ah.
Margins waa tixgelin kale oo xeeladaysan. Dad aad u yar oo aan qorshayn soo bandhigida noloshoodu waxay diiradda saareysaa sidii loo ilaalin lahaa xadadka dhinacyada u hooseeya, sare, bidix iyo midig. Aniga aragtidayda, darafyadu waxay kamid yihiin aaladaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta la heli karo. Had iyo jeer ku dadaal inaad ilaaliso soohdimaha, xitaa haddii ay macnaheedu tahay jaantusyada, qoraalka, sawirrada iyo walxaha oo yaraanaya si aad uga dhigto kuwo ku habboon iyaga oo ilaalinaya marinnada isdaba jooga ah ee bogaggaaga.
Ugu dambeyntiina, tixgeli qoraalka - waxaan ka wada hadalnay hoos u dhigidda bogagga, iyo fudeydka, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaad wajihi doontid derbiyada erayga qoraalka xad dhaafka ah. Sideed ugu abuuri kartaa kala-sarreyn leh darbiyada ereyga? Isticmaal qoraalka si ku habboon. Mar kasta oo aad leedahay marin ballaaran oo qoraal ah, tixgeli inaad ku hoggaamiso cinwaan cinwaan gaaban oo soo koobaya waxyaabaha muhiimka ah ee laga soo maro marinka. Kala saar cinwaanka adoo ku dhiiranaya qoraalka cinwaanka, kana dhigaya wax yar oo weyn iyo / ama ka dhig midabka farta midabkiisu ka sii madowyahay marinka.
Ugu Dambeyn Laakiin Maahan Ugu Yaraan, Ka Dhex Dhex Door Slide kasta
Heerka ugu dambeeya ee dhaweyntu wuxuu eegayaa shay kasta (tusaale, shax kasta, sadarka qoraalka, sawirka, iwm.) Ee ku jira bogag kasta. Marka ay timaado xogta, shax kasta, shax iyo jaantus waa inay si toos ah ula xiriiraan xarunta guud ee culeyska. Si adag u tixgeli inaad ka saarto xog kasta oo la dejiyo haddii aysan sii wadin ujeeddada guud ee soo bandhigidda. Taasi waxay tiri, shax kasta, shax iyo jaantusba waxay u baahan yihiin diiradooda, isku dheelitirkooda iyo kala sarreynta ay isku jiidayaan.
Marka hore, garwaaqso in xogtu tahay ilmahaaga. Waxaad ku bixinaysaa saacado iyo lacag aan tiro lahayn kobcinta xogtaada iyo falanqayntaada, waxaadna rabtaa inaad wadaagto. Dhibaatadu waxay tahay, qofna dan kama lihi wax ku saabsan ilmahaaga (iyadoon loo eegin inta sawir ee ilmo ah ee aad wadaagto), iyo cidina dan kama hayso inta badan xogtaada. Markay soo bandhigayaan shaqadooda, dadka badankood waxay dulmaraan xogta maxaa yeelay ma doonayaan inay marin habaabiyaan ama wareeriyaan, tan ugu muhiimsanna, ma doonayaan inay ka tagaan wax muhiim ah. Taasi waxay tiri, tixgeli furaha muhiimka ah ee doorkaaga soo-bandhige waa daaweyn, u gudbinta macluumaad xeel dheer halkii aad ku aasi lahayd dhagaystayaasha dhexdeeda.
Dhanka kale, nashqadeynta xogta waxay isticmaashaa aalado lamid ah nashqadeynta isbadalada. U isticmaal midabka si habboon oo macquul ah. Isticmaalka habboon ee booska taban wuxuu abuuraa kala sarreyn. Dhamaadka maalinta, xogtu waa inay noqotaa geesiga, qodobbada xogta ugu muhiimsan waa inay istaagaan. Ka takhalus sumadaha iyo weelasha aan loo baahnayn, calaamadaha xashiishka, khadadka iyo halyeeyada. Ka takhalus dawannada iyo foorida ee abuura isku buuq iyo jahwareer muuqaal ah. Ka raadi sheekada xogta, hana dhaafin.
Si aad ugu karkariso naqshadeynta xogta weyn liistada feer, waxaa jira saddex waxtar. Xogtu waxay ubaahantahay inay ahaato:
Marka hore, xogtu waxay u baahan tahay inay ahaato mid fudud la heli karo iyo sax ah. Faasaska iyo cabirka muuqaalka, baararka iyo khadadka waxay u baahan yihiin inay sax ahaadaan. Aragtida muuqaalku waa inay si cadaalad ah u muujisaa xogta. Kala saraynta muuqaal ahaaneed ee ku habboon waa inay ka dhigtaa xogta geesiga, iyada oo aan la helin dawanno iyo foori.
Ta labaad, waa xogtaada aragti? Xogtu waa inay sheegtaa sheeko oo si toos ah ugu xirnaataa dulucda soojeedinta guud. Haddii aysan jirin wax xiiso leh oo ku saabsan xogta, tixgeli inaad ka saarto. Noqo mid ka fekeraya cabirida isku duubnaanta xogta, maxaa yeelay inta badan 'granular', way ka sii adag tahay in la xoojiyo fikradaha.
Saddexaad, waa xogta qurux badan, bilic ahaan? Ma u adeegsanaysaa midab ahaan qalab ahaan si ula kac ah? Muuqaalaynta xogta miyay u fududahay sida ugu macquulsan? Ma jiraan xariiqyo geesinimo leh, qoraal iyo qaabab meeshii loo baahdo? Ma jiraa meel bannaan oo taban?
Markaad qorsheyneyso soo bandhigid kasta, tixgeli sida ay ugu shaqeyso seddex heer oo dhaweyd ah. Heer kasta, tixgeli sida ay ugu xirmayso xarunta guud ee culeyska. Isla mar ahaantaana, waa inay sidoo kale leedahay meel u gaar ah oo ilaalisa wadajirka. Diirada saar sedexdaan heer iyo soo bandhigidaada ayaa xambaari doonta maalinta.
Tags: xogta jaantuskagooldhalintaData-diriddanaqshadda keynotekorontoNaqshadaynta awooddasimbiriirixan barta korontadabandhigNaqshadeynta bandhigga
Kory Grushka waa aasaasaha Shirkadda Sheekooyinka, hay'ad hal abuur leh oo ka caawisa hoggaamiyeyaasha ganacsiga inay u sheegaan sheekooyinka xasaasiga ah iyagoo soo bandhigaya, fiidiyoow / animation, infographics iyo dashboard, iyo qalab kale. Kory waa agaasime hal abuur leh, istiraatiijiyad, fulinta hormarinta ganacsiga iyo garyaqaan hore oo shirkadeed. Wuxuu khibrad ballaaran u leeyahay warshado kala duwan, isagoo maareynaya istiraatiijiyad sumadeed, hal-abuurnimo iyo naqshadeynta mashaariic loogu talagalay shirkadaha Fortune 500 oo ka bilaabma CPG illaa teknolojiyad.